Softwares -ka Lacag -bixinta ugu Fiican 2021 -ka - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Softwares -ka Qiimaha ugu Fiican Bilaash ah 2021
software-biil-lacag la'aan ah
Waxaan hore u ogeyn in ganacsigaaga yar -yar uu leeyahay kharashyo badan oo lug ah. Waxa aysan u baahnayn waa kharash dheeraad ah, gaar ahaan shaqada sida qaansheegashada iyo xisaab -celinta. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa xalka qaansheegadka adoo adeegsanaya softiweerka qaansheegta bilaashka ah.
Kaliya waxaad u baahan tahay gacmahaaga iyo laptop si aad shaqada u qabato. Maskaxda ku hay, kuwani waxay horeba ugu adeegsadeen qaansheegashada gacanta.
Waxaa jira softiweer badan oo qaansheegasho leh shaqooyin aan fiicnayn kuwaas oo xor u ah isticmaalka. Khidmadaha ku lifaaqan waxaa laga yaabaa inay ka baaraandegaan bixinta kaarka deynta.
Loo -shaqeeyayaasha u baahan inay u soo diraan qaansheegad yar ganacsiyada waaweyn ee leh saldhig macmiil oo weyn, waxaa jira xal lacag la'aan ah oo qof walba heli karo.
Nala joog intaan taxno oo sharraxno astaamaha softwares -ka lacag -la'aanta ah ee lacag -la'aanta ah.
Waa maxay Software Invoicing?
Waxaan ku bilaabi doonaa inaan si kooban uga hadalno qaansheegta.
Erayada fudud, qaansheegtu waa dukumenti ganacsi oo tilmaamaya oo diiwaangeliya macaamilka u dhexeeya iibsadaha iyo iibiyaha. Waxay u sheegeysaa macmiilkaaga inta ay kugu leeyihiin, marka bixinta la rabo iyo adeegyada aad bixisay.
Guud ahaan, qaansheegyada waxay la socdaan iibinta badeecada kontoroolka alaabada, xisaabinta, iyo ujeeddooyinka canshuurta.
Akhriso: 15 Software -ka Raadinta Xogta ugu Fiican 2021
In gacanta lagu qoro qaansheegtu waxay qaadataa waqti badan waxayna u nugul tahay khaladaad iyo khasaare. Tani waa meesha doorka qaan -sheegashada softiweerku soo galo. Diiwaanada elektaroonigga ah ayaa sidoo kale u oggolaanaya raadinta sahlan iyo kala -soocidda macaamil ganacsi ama taariikho gaar ah.
Software -ka qaan -sheegashadu waa qayb ka mid ah barnaamij oo otomaatig u noqon kara hawlgalka qaan -sheegashada ee meheraddaada.
Maxaad ugu Baahan Tahay Software Qaansheegasho?
Tani waxay sharraxaysaa faa'iidooyinka adeegsiga softiweerka qaan -sheegga haddii ay bilaash tahay iyo haddii kaleba.
Isticmaalka softiweerka qaansheegta bilaashka ah, adeegsadayaashu waxay ku buuxin karaan qaansheegad waqti yar. Dhammaan shaqada adag waxaa lagu dhammayn doonaa gujinta badhanka. Waxa kaliya ee loo baahan yahay waa inaad dhigto magaca macmiilkaaga iyo macluumaad kale, oo si otomaatig ah faahfaahinta ayaa la tusi doonaa mar kasta oo aad rabto inaad qaansheegto macaamilkaaga.
Marka qaansheegta gacanta lagu diro, waxay u taagan tahay halista in la lumo. Xitaa haddii ay soo marto, macmiilku si khaldan buu u dhigi karaa. Software -ka qaan -sheegku wuxuu tirtiraa dhammaan dhibaatooyinkaas.
Ka sokow dirista onleenka, waxaa jira xusuusinta emaylka macmiilka oo ku saabsan qaansheegta.
3. Nidaamka Raadraaca
Inta badan softiweerka qaan -sheegga ee intarneedka wuxuu leeyahay nidaam dabagal ku dhisan oo ku ogeysiiya marka macmiilku helo qaansheegta. Sidaa darteed, macmiilku ma laha sabab uu dib ugu dhigo/u bixiyo lacag -bixinta.
Sidoo kale, nuqul ka mid ah qaansheegta waa la keydiyay, tanna si fudud ayaa loo xanaaqi karaa ama wax looga beddeli karaa.
4. Waxay kobcisaa kaydinta
Dirista qaansheegyada jirka waxay isticmaashaa warqad, khad, baqshad, iyo lacag ay ku keydsan yihiin barnaamijyadan qaansheegta.
Yaa Adeegsada Softwares Lacag La'aan Ah?
Freelancers, milkiilayaasha meheradaha yaryar, ganacsatada
Nin kasta oo ganacsade ah oo raba inuu soo jiito oo haysto macaamiisha
Iibsashada oo dejisa habab cusub oo lagu keydiyo lacag iyo waqti, waxay kordhisaa fududeynta iyo wax soo saarka.
Maxay yihiin Sifooyinka Software -ka Qaan -sheegashada Bilaashka ah ee Weyn?
Software -ka qaansheegta bilaashka ah ee ugu waxtarka badan wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda;
Biilasha aan xadidnayn: Softiweerka qaansheegta ee wanaagsan oo wanaagsan waa inuu siiyaa tiro wanaagsan oo macaamiil firfircoon iyagoon u baahnayn inaad sare ugu qaaddo qorshe qaali ah.
Si fudud loo isticmaalo: Aaladahaani waxay leeyihiin is -dhexgal aan kala go 'lahayn waxayna bixiyaan astaamo wanaagsan oo kuu oggolaanaya inaad keydiso macluumaadka macmiilka, faahfaahinta badeecada/adeegga, qiimaha caadiga ah, iyo inbadan.
Ku aqbal lacag -bixinta onlayn: Qaybta ugu muhiimsan ee qaan -sheegashadu waa lacag -bixinta. Waa inay aqbashaa bixinta kaarka deynta. Qaarkood waxay kaloo aqbalaan wareejinta bangiyada iyo siligyada. Waxaa muhiim ah in la ogaado in lacag -bixinnada onlaynku ay adeegsadaan irdaha ka shaqeeya macaamilka. Sidaa darteed, barnaamijyadan qaansheegta bilaashka ah ayaa laga yaabaa inay ku lifaaqaan khidmad astaantan.
Akhri: Sidee Shirkadaha Kaarka Deynta Loogu Sameeyaa Lacag?
Aragtay waa mid ka mid ah softiweerka cusub ee qaansheegadka kaas oo bixiya qaansheegasho fudud oo leh amniga safka sare.
Qaar ka mid ah astaamaha waxaa ka mid ah lacag -bixinno isku -dhafan oo caalami ah, duubitaan kharash ah, soo -dejinta CSV Excel ee dhammaan xogta.
Qorshaha bilowgu waa bilaash weligiis wuxuuna bixiyaa 20 qaansheegasho iyo xigasho bil kasta hal isticmaale iyo 10 macmiil.
Sababta waa gabi ahaanba waqti raadraac iyo qalab qaansheegasho leh jadwalka taariikhda iyo aaladaha warbixinta si dadka isticmaala loo habeeyo oo hawsha loo qabto.
Asal ahaan, adeegsadayaasha sababtu waxay xayeysiin karaan astaanta shirkadooda si ay ugu adeegsadaan qaansheegyadooda ka dibna ku galiyaan qaansheegyada barta isticmaaleha. Tani waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay lacag ku bixiyaan internetka. Sababtu waxay taageertaa nidaamyo canshuureed oo badan waxaana laga heli karaa in ka badan 100 waddan.
Qaan-sheegashada daruur-ku-saleysan iyo boorsada dhijitaalka ah waxay dhexgashaa barnaamijka maaraynta mashruuca Basecamp, QuickBooks, iyo PayPal.
Xusuusnow waxaan hore u soo sheegnay in software -ka qaan -sheegashada ugu fiican uu bilaash yahay, sax? Tani waa run marka laga reebo 2.7% lacag-bixin-ku-socodka macaamilka kaarka deynta.
qaansheegta wuxuu leeyahay qorshe weligiis bilaash ah oo u oggolaanaya saddex macmiil oo lagu daray biilasha aan xadidnayn.
Waxay kaloo leedahay casriyeyn u shaqaysa meheradaha yaryar. Si kastaba ha noqotee, qorshe kasta oo caymis ah ayaa oggolaanaya 30 maalmood oo tijaabo ah, sidaa darteed software-kan ayaa u fiicnaan kara ganacsiga sii kordhaya
Iyadoo Zoho, waxaad u heli doontaa qorshe lacag la'aan ah milkiilayaasha meheradaha leh in ka yar 5 macmiil inay qaansheegtaan. Barnaamijkan qaan -sheegashada ugu fiican wuxuu isku daraa badeecadiisa laakiin wuxuu kaloo adeegsadaa codsiyo kale sida Dropbox, Google Drive, PayPal, Stripe, iyo OneDrive.
Ugu dambayn, waxay u fiican tahay desktop -ka iyo mobilada, Zoho waa meel aad u fiican oo laga bilaabo.
Ganacsiyada yaryar waxay jecel yihiin software -ka qaansheegta bilaashka ah ee ugu fiican Gacan ee ah “hadda i bixi”. Tani waxay si otomaatig ah ugu dirtaa emayl xusuusin macaamiisha haddii lacag -bixintoodu ay ku dhowdahay inay dhacdo ama ay daahdo
Tijaabada lacag la'aanta ah waxaa loogu talagalay hal isticmaale, laakiin waa lacag la'aan weligeed qaan -sheegyada aan xadidnayn.
Dhibaatada kaliya ee jirta ayaa ah in nooca xorta ah uu la yimaado astaanta Handdy marka lagu daro astaantaada ku taal qaansheegyada.
Indy waa aaladda qaansheegadka ugu habboon ee madaxbanaanida. Aaladda Qaansheegyada Indy wuxuu ku siinayaa awood aad ku abuurto qaansheegta pro dhowr daqiiqo gudahood. Shaqadaada u keydi sida template si aad marar badan u isticmaasho.
Habyaalada qaansheegta waxaa ku jira dhammaan macluumaadka ay macaamiishaadu u baahan yihiin waxayna ku siinayaan awood aad ku dari karto summadaada shaqsiyeed. Waxaad si toos ah ugu xiriirin kartaa saacadaha shaqada qaansheegta adiga oo adeegsanaya aaladda Raadiyaha Waqtiga oo naftaada waqti badbaadi. Samee habab lacag bixin oo caan ah sida Stripe, PayPal iyo Zelle si aad ugu fududeyso macaamiishaada bixinta.
#7. Xisaabinta Mawjada
Wave wuxuu siiyaa software gabi ahaanba bilaash ah qaansheegta, xisaabinta, mushaharka, iyo sidoo kale iskaanka rasiidka.
Adeegso aaladda qaansheegta Wave si aad u abuurto, u dirto qaansheegta, oo aad u hesho lacag -bixinno. Haddii aad waqti qaadato si aad u abuurto macaamiil oo aad ugu darto alaabta/adeegyada aaladda, waxaad si fudud ugu dari kartaa faahfaahinta qaansheegad adiga oo taabanaya qaybta quseysa qaansheegta.
Iyada oo xogta lagu kaydiyey Wave, waxaad abuuri kartaa oo diri kartaa qaansheegad wax ka yar 60 sekan.
Waxaad ku dari kartaa xoogaa habayn aasaasi ah qaansheegta, sida astaanta ama cinwaanka gaarka ah, oo dooro macluumaadka aad ka muujinayso ganacsigaaga. Waxaad kaloo abuuri kartaa qaansheegyo soo noqnoqda oo la soo diro iyadoo lagu saleynayo jadwalka aad cayintay waxayna ku dallacaysaa hababka lacag -bixinta macmiilaha ee keydsan.
karbaash waa nidaam lacag bixin oo loogu talagalay aaladaha eCommerce iyo sidoo kale abuuraha qaansheegta.
Si aad u abuurto qaansheegad, waxaad geli doontaa koontadaada Stripe oo guji Macaamiisha, ka dibna Invoices.
Halkan, waxaad awoodi doontaa inaad aragto liisaska qaansheegyada la sameeyay, kuwaas oo dhammaantood lagu kala sooci karo iyadoo lagu salaynayo hadday yihiin qabyo -qoraal, wakhtigii la dhaafay, ama la bixiyay.
Markaad gujiso batoonka Abuurista qaansheegta, waxaad awoodi doontaa inaad gacantaada ku samaysato qaansheegtaada. Tan, waxaad ku xulan doontaa macmiilka, ku dari doontaa alaabta iyo qiimahooda, iyo rasiidh kasta oo khuseeya, canshuuraha, iyo ajuurada kale. Macmiilku wuxuu ku bixin karaa qaansheegta onlaynka ah ama waxaad ka qaadi kartaa kaarka deynta ee faylka.
Faa'iidada ugu weyn ee adeegsiga softiweerkan qaansheegta bilaashka ah ayaa ah in dhammaan warbixinnada dakhligaaga ee dhammaan aaladaha aad dooratid inaad adeegsato ay ka jiraan isla meel. Markaa markay timaaddo waqtiga xisaabinta iyo canshuuraha, uma baahnid inaad ka walwasho inaad wax ka maqnaato.
Waadna awoodaa otomaatig Stripe leh Zapier. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad u soo dirto khidmadaha guuldaraystay Slack oo aad ku darto iibinta Stripe -ka cusub Google Waraaqaha.
Goosashada waa mid ka mid ah softwares -ka qaansheegta ugu fiican ee lacag -la'aanta ah kaas oo loo isticmaalo in lagu dallaco macaamiisha saacaddiiba. Waa app raadraaca waqtiga.
Maadaama saacadaha hore loo tiriyey Harvest, kaliya dib u eeg wadarta oo samee qaansheegad. Gunno ahaan, waxaad u cayimi kartaa haddii hawl wakhti go'an la raaci karo ay tahay mid la xisaabin karo iyo in kale, taas oo noqon karta mid waxtar leh marka la xisaabinayo kharashka dhabta ah ee mashruuc kasta.
Waxa kale oo aad la socon kartaa kharashyada, la socon kartaa miisaaniyadda mashruucaaga, oo aad heli kartaa ogeysiisyo marka wakhtigaaga la bixin karo uu ku soo dhow yahay miisaaniyaddaada mashruuc.
#10. Qaansheeg Bixin
Haddii aadan soo dirin qaansheegyo ku filan si aad qiil ugu yeelatid saxiixitaanka aalad qaansheegasho oo gaar ah, Qaansheeg Bixin by Invoiced waa aaladda adiga.
Waxaad abuureysaa qaansheegad, u dir qaansheegyadaada macaamiisha, xitaa waxaad aqbashaa lacag -bixinnada khadka tooska ah adigoon kaa doonayn inaad sameysato koonto ama gasho.
Kaliya ku qor faahfaahinta qaansheegadkaaga, ku dar astaanta meheraddaada, oo dooro in la muujiyo cadadka canshuurta, dhoofinta, iyo dhimista. Kadib, dhagsii U dir Qaansheegta si aad u gasho cinwaanka emaylka macmiilkaaga oo dooro qaababka lacag -bixinta ee aad qorsheyneyso inaad aqbasho.
Invoice Generator wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto xiriirinta lacag -bixinta PayPal, Venmo, iyo Kaashka Square.
Akhri: Venmo vs PayPal: Barnaamijyada Lacag -bixinta ugu Fiican
#11. Dib -u -soo -noqoshada
ReliaBills waa softiweer kale oo qaansheeg bilaash ah oo u oggolaanaya qaansheegta aan xadidnayn, emaylka iswada xusuusinta, iyo qaansheegyada soo noqnoqda ee aan lahayn khidmadaha dejinta.
Qabashada halkan ayaa ah inaad u dallacdo qorshe qaali ah si aad u aqbasho lacag -bixinta internetka ama aad ku darto kaarka amaahda shaqeynta.
Barnaamijkan qaansheegta bilaashka ah, waxaad ku abuuri kartaa qaansheegad waqti yar.
Maqaalkani wuxuu taxay softiweerka qaansheegta bilaashka ah oo ganacsiyadu u isticmaali karaan inay ku xakameeyaan dhibaatooyinkooda qaansheegadka.
Waxaad dooran kartaa qorshayaasha caymiska haddii baahida ganacsigu ka badan tahay shaqooyinka nooca xorta ah.
25 siyaabood oo lacag laguugu siiyo si aad u eegto Raashinkaaga 2021
Sida Loo Buuxiyo Amarka Lacagta Talaabo Talaabo Wareega Hantida
15 Software -ka Raadinta Xogta ugu Fiican 2021
20 Software Tracking Investment ugu Fiican 2021 | Tusaha Khubarada
15 Qalabka ugu Fiican ee Google ee Ganacsiga ee 2021
Sida bilowgaaga farsamada ama ganacsigaaga oo koraya oo si joogto ah u sii deynaya astaamo cusub, waxaa jira suurtagal…